Maxaa lagama maarmaan ah si loo gaaro xayeysiis hal abuur leh | Hal-abuurka khadka tooska ah
Maxaa lagama maarmaan ah si loo gaaro xayeysiis hal abuur leh
Dhammaan xirfadlayaasha ku jira adduunka suuq-geyntu iyo xayaysiisyadu waxay maqli doonaan wakhti ka mid ah xirfaddooda Xayeysiintu si ay u shaqeyso, waa inaad sameyso olole xayaysiis oo wanaagsan. In guusha ama guuldarada badeecad ama adeeg ay ku xiran tahay taas, ololahaas.
Haddii ololaha xayaysiisku aanu fiicnayn oo sidaas darteed aanu shaqayn, dhammaan shaqada iyo horumarka ka dambeeya waxay noqon doonaan kuwo aan waxtar lahayn. Waxaas oo dhan si ay u shaqeeyaan, waa in aad gaartaa meel muhiim ah, iyo qodobkan waa in la horumariyo advertising hal abuur leh.
Maalinba maalinta ka danbaysa, dhamaanteen waxaan la kulannaa fariimo xayaysiis ah oo aan tiro lahayn, midba midka kale, baska, dhageysiga raadiyaha, socodka ... waa fariimo u tartamaya inay soo jiitaan dareenkayaga, ujeedaduna tahay inaan isticmaalno alaabadooda.
1 Waa maxay xayaysiis hal abuur leh?
2 Waxyaabaha loogu talagalay xayeysiinta hal-abuurka wanaagsan
3 tusaalooyin xayeysiis hal abuur leh
Waa maxay xayaysiis hal abuur leh?
Sida aan sheegnay, "burburin" joogtada ah, waxaan dooneynaa inaan u hadalno si qarsoodi ah, ma tilmaamayso in calaamaduhu ay gaaraan ujeedada loo soo jeediyay. Annagu nama soo dhex galaan, sidaas darteed farrimmadoodu way libdhaan. Waxay yihiin calaamado aan awoodin inay ka faa'iidaystaan ​​muhiimada xayaysiinta hal-abuurka ah.
Waa summadaha, kuwa, iyada oo loo marayo naqshadahooda iyo kooxda xayeysiinta, u ogeysii Naftaada uga sooc tartamayaasha inteeda kale iyada oo loo marayo fikrado cusub, taas oo soo jiidan doonta macaamiisha.
Waa hab-raac adag oo baadhiseed, kaas oo ay tahay inay ku jiraan male-awaal joogto ah, hal-abuurnimo iyo ka sarreeya dhammaan waayo-aragnimada. Uma jeedno xaqiiqda ah inaad sanado badan shaqaynaysay, waxaanu tixraacaynaa waayo-aragnimada uu qofku kasbanayo falanqaynta tartanka, adoo qooyay fikrado cusub oo asal ah.
Xayeysiis hal abuur leh ayaa aad muhiim u ah maanta. Tanina waa sababta oo ah, hubaal markaad guriga timaado ka dib markaad maalinta oo dhan wax baranayso ama shaqaynayso, xitaa ma xasuusan kartid labadii xayaysiis ee ugu dambeeyay ee aad aragtay ka hor inta aanad albaabka ka soo bixin. Ma akhrino xayeysiisyada, waxaan si toos ah maskaxdeena ugu haynaa waxa aan u aragno xiisaha, cusub.
Waxyaabaha loogu talagalay xayeysiinta hal-abuurka wanaagsan
Xayeysiis hal abuur leh ayaa ina soo bandhigaya a faa'iido aad u muhiim ah, taasina waa inaan ka soo baxno tartankeena tooska ah. Ololaha xayaysiisku si uu noo siiyo farqigaas oo aan u awoodno in ay macaamiisha ku sii wataan fariinta, waa in ay la kulmaan dhinacyada soo socda.
Ha ka baqin inaad abuurto xayeysiis aan caadi ahayn. Uma baahnid inaad ka cabsato dhaleeceynta si aad u soo jiidato dareenka oo aad u soo jiidato dadweynaha.
Haddii aad ku qanacsan tahay fikradda ah inaadan ka baqin, markaa waddada xigta waa inaad martaa diirada saara istaraatijiyad toos ah, taas oo ah, ku gardaran xayeysiiska, had iyo jeer ku jira sharciga. Waa inaad geesi noqotaa markaad xad gudubto.
Qodobkani waa mid aad muhiim u ah, waa in aan koobannahay, dadweynaha aan wax ka qaban doono waxay haystaan ​​dhowr ilbiriqsi oo keliya waqtigooda intaadan dhaafin, markaa waa inaad tirisaa xogta saxda ah.
Macluumaadkani waa in si toos ah oo halabuur leh u muuji, maadaama ay tani saameyn weyn yeelan doonto waxayna kordhin kartaa xiisaha daawadaha.
Ugu dambayntiina astaanta iyo macnaha guud ee ay ku shaqaynayso waa in ay ahaadaan kuwo si fiican isugu xidhan. Ma noqon doonto olole guul leh, haddii daawadaha uu xasuusto heesta oo uusan calaamadin, waa inay xasuustaan ​​​​xeerka.
tusaalooyin xayeysiis hal abuur leh
Waqtiga aan ku jirno, aad bay muhiim u tahay in la horumariyo ololayaasha xayeysiiska hal-abuurka ah, iyo in ka sarreeya dhammaan in la galo adduunka internetka si alaabtu u jirto suuqa. Si aad ugu guurto adduunka dhijitaalka ah, hal-abuurka ololaha waa lama huraan.
Netflix waxaa loo arkaa mid ka mid ah noocyada ugu horreeya ee xayeysiiska hal-abuurka ah Sida laga warqabo, shaaracyadiisa oo lagu soo bandhigay bartamaha magaalooyinka waaweyn ayaa noqday mid soo jiidasho leh, mana jirto qof aan u istaagin inuu akhriyo oo sawiro.
Netflix iyo taxanaha Narcos. Sharaxa la furay ee Sol.
Netflix iyo taxanaha Fe de ETA. Canvas ayaa la geeyay San Sebastian
Canvas ee taxanaha Waxbarashada Galmada, ee Gran Vía
Sida aad ku arki karto tusaalooyinka soo socda, ma aha oo kaliya inuu isticmaalo boodhadhka xayeysiisyada aadka loo buunbuuniyay iyo xitaa dhaleeceynta, laakiin sidoo kale wuxuu ku habboon yahay mid kasta oo dhexdhexaad ah.
Netflix waxay joogtaa xitaa metro Madrid
Marquee taxane ah oo Waxbarashada Galmada oo lagu rakibay Cuenca
Waxaan awoodnay inaan xaqiijinno taas Ma aha oo kaliya in naqshadeynta ay muhiim u tahay ololaha hal-abuurka, laakiin sawirka nuqulku sidoo kale waa lagama maarmaan, sida aan ku arki karno ololahan Uber.
Uber ula tag meesha aad rabto
Raad Uber oo sii wad xafladda
Uber ula safar cabsi la'aan heerkaaga
Mid kale oo ka mid ah noocyada boqorada ee xayeysiiska hal-abuurka leh waa shirkadda Fedex. Yaa intii ay jirtay garanaysay sida loola xidhiidhiyo dadkeeda hab hal abuur leh.
Ololaha Dariska ee Fedex, kaas oo ay doonayso inay ku muujiso xawaaraha gaarsiinta.
Meheradaha mobilada ayaa ku mahadsan taageerada Fedex. Ololaha Fedex Mexico.
Shaki la'aan, liiskan waa inuu ku jiraa laba ka mid ah noocyada cuntooyinka degdega ah ee ugu awoodda badan adduunka oo dhan; McDonald's iyo Burger King. Laba nooc oo, iyada oo loo marayo xafiiltankooda, waxay ku guuleysteen inay abuuraan ololeyaal xayeysiis hal abuur leh oo gaar ah oo aan la soo celin karin.
McDonalds ayaa siidaaya luulkan yar isagoo tuuraya in Burger King uu koobiyeeyo hamburgerskiisa.
McDonalds waxay kor u qaadaa adeeggeeda gaarsiinta.
Aaway McDonalds-ka ugu dhow? Baradhada ayaa kuu sheegaya.
Wi-Fi bilaasha ah McDonald's
Burger King iyo quruxda boqortooyada
Kaalay sida cawl, oo wax u cun sida boqor oo kale. Ololahan, waxaan arki karnaa sida uu u tilmaamayo McDonalds clown tan iyo kan sawirka ku jira dharka isaga oo kale ah.
Hilibku waa daciif, xilliga khudradda ayaa bilaabmaya
Jacayl aan shuruud lahayn oo u dhexeeya Burger King iyo McDonalds. Olole ka socda Finland wuxuu muujinayaa jacaylka ka dhexeeya labadan magac.
Burger King oo ka faa'iidaysanaya maalinta Kibirka ee Finland si uu u bilaabo olole cusub oo ay ka muuqdaan labada mastar ee silsiladaha cuntada degdega ah. Waa olole si kasta oo suurtogal ah u xusaya jacaylka.
Waxaa jira ololeyaal xayaysiis oo hal abuur leh oo aan tiro lahayn, mana ku soo wada ururin karno hal boosto. Taasi waa sababta aan u samaynay ururin yar oo ka mid ah ololayaasha xayaysiinta ee ugu caansan waqtiyadii dhawaa.
Xasuusnoow in ololaha hal-abuurku uu shaqeeyo, waa in uu soo jiitaa indhaha dadweynaha, hal-abuur iyo weliba in dadweynuhu ku raaxaystaan.. Laakin waxa ugu muhiimsan waa in aad maareyso in aad khibradaas la xiriirto astaanta aad la shaqeyneyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Maxaa lagama maarmaan ah si loo gaaro xayeysiis hal abuur leh
Aaladaha khadka tooska ah ee lagu beddelo xarfaha